ICasa Marta, indlu ekwindawo yaseLucca
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguFausto
ICasa Marta sisakhiwo samatye senkulungwane ye-18 esinemigangatho emithathu. Imi kwilali yasePascoso, kwiphondo laseLucca. Ngamafutshane, le ndlu yenziwe: 1 ikhitshi / igumbi lokuhlala + 2 igumbi lokulala + 1 igumbi lokuhlambela elipheleleyo + 1 igumbi lomgubo + 2 pantries.
E-Pascoso kufuneka upake imoto kwindawo yokupaka kawonke-wonke yasimahla (malunga neemitha ezili-100 kude nendlu), kodwa ungafika kude kube malunga neemitha ezingama-30 ukulayisha kunye nokothula imoto. Kwidolophana kukho iindawo zokutyela ezi-2 "zosapho".
Ibhedi yomntwana kunye ne-charcoal barbeque iyafumaneka (simahla).
I-Intanethi ye-WiFi yasimahla iyafumaneka kwikhaya lomnini (eliphambi kweCasa Marta)
IPascoso inabemi abali-100 kuphela (kunye neendawo zokutyela ezi-2), kwaye incinci kakhulu eneendlela ezimxinwa zamatye kangangokuba iimoto zingena edolophini ecaleni kwendlela emfutshane kwindlela enkulu kuphela. Phantse zonke izindlu zasedolophini zakhiwe ngamatye, kuquka nophahla lwazo, kwaye amatye agudileyo ezitalatweni abekwa kumakhulu eminyaka eyadlulayo. IPascoso yiparadesi yabahambi; nangona kunjalo akukho kude "kwizixeko zobugcisa" zaseTuscany: uLucca, Pisa, Florence kunye neSiena yi-24, 48, 96 kunye ne-144 km kude; ngaphezu koko Viareggio kunye Forte dei Marmi, phakathi iilwandle idumileyo Italian, 48 km kude (kubandakanywa 24 kuhola wendlela).
Umbuki zindwendwe ngu- Fausto
I am a retired medical doctor. For a demo: (Website hidden by Airbnb)
Ehlotyeni nam ndihlala ePascoso. Kwaye ndingavuya kakhulu ukudibana nondwendwe lwam, ngokubanika lonke ulwazi abaludingayo. Ndiyakwazi nokuba ngumkhokeli wokuhamba ezintabeni nakwiindawo eziphakamileyo